ရှန်ဟိုင်း အား ပြန်လည် ရှင်သန် လာစေရန် မြှင့်တင် ပေးသည့် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များမှ Meituan, Hello Company - Pandaily
ရှန်ဟိုင်း အား ပြန်လည် ရှင်သန် လာစေရန် မြှင့်တင် ပေးသည့် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များမှ Meituan, Hello Company
Jun 01, 2022, 15:57ညနေ 2022/06/01 23:29:18 Pandaily
ဒေသတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု ကိုထိန်းချုပ် ရန်ရည်ရွယ် သည့် ရက်သတ္တပတ် များစွာ တင်းကျပ်သော ပိတ်ဆို့ မှုများ အပြီးတွင် ရှန်ဟိုင်း အစိုးရသည် မြို့ ၏စီးပွားရေး ပြန်လည် ရှင်သန် စေ ရန်ရည်ရွယ် သည့် မူဝါဒ များစွာကို မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ရှန်ဟိုင်း နေထိုင် သူများကို နေ့စဉ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် အဓိက ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း များသည်လည်း ဤ ကြိုးပမ်း မှု ကိုထောက်ပံ့ ရန် ခြေလှမ်း များ လှမ်း ခဲ့သည်Meituan Takeaway, Didi Global , Saicmobility, T3 Travel, Hellobike စသည်တို့ပါဝင်သည်။
Meituan ထုတ်ယူ သည့် အချက်အလက်များအရ ရှန်ဟိုင်း ရှိ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သည် အွန်လိုင်း မှ အစားအစာ များ ပြန်လည် ပို့ဆောင် ပေးခဲ့သည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အလုပ် ပြန်လုပ် ရန်နှင့် အခက်အခဲ များကို ကျော်လွှား နိုင်ရန် Meituan Takeaway သည် မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် အရည်အသွေး မြင့်မားသော ရှန်ဟိုင်း ကုန်သည် ၁၀, ၀၀၀ ကျော် အား “အစားအစာ ဖြန့်ဝေ သည့် Butler ၀ န်ဆောင်မှု” ကိုထောက်ပံ့ ရန် “အစားအစာ ဖြန့်ဝေ သည့် မိတ်ဖက် များ” အဖွဲ့ တည်ထောင်ရန် ယွမ်သန်း ၄၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၉ ၇၆ သန်း) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပလက်ဖောင်း သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ ဖြန့်ဖြူး ရေး ပြ problems နာများကို ဖြေရှင်းရန် နှင့်အ ွန်လိုင်း စားသုံးမှု ကိုလှုံ့ဆော် ရန်ရည်ရွယ် သည့် ထောက်ပံ့ငွေ အတွက် ယွမ်သန်း ၆၀၀ ကျော် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၉. ၆၄ သန်း) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မည်ဖြစ်သည်။
ရှန်ဟိုင်း နိုင်ငံသား များ၏ လိုအပ်ချက် များကိုပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန်အတွက် Meituan Mai Cai က သူသည် စုဆောင်းမှု ကြိုးပမ်း မှုများ ကိုတိုးမြှင့် မည်ဖြစ်ပြီး အလုပ် နှင့် ထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည် စတ င်ရန် စွမ်းအင် ပိုမို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် ရောင်းချ သော ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိပြီး မေလတွင် စတင်မိတ်ဆက် ခဲ့သော မျိုးကွဲ အသစ် များသည် ၁၀% ကျော်ရှိသည်။ ရာသီ အလိုက် ထုတ်ကုန် အသစ် များအပြင် ရေချို ထုတ်ကုန် များကိုလည်း တဖြည်းဖြည်း အွန်လိုင်း တွင် ရောင်းချ နေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ရှန်ဟိုင်း အစိုးရသည် စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူ ရေး အစီအစဉ်ကို ကြေငြာ ခဲ့သည်
ခရီးသွား ပလက်ဖောင်း များအရ Didi Global သည် ယာဉ်မောင်း များအတွက် “တည်နေရာ ကုဒ်” ကိုပြင်ဆင် ထားသည်။ ယာဉ်မောင်း သည်ကား ထဲတွင် နေရာ ကုဒ် တစ်ခု တင်ပြီး ကားမောင်း မီ “antigen & nucleic acid” လက်မှတ် ကိုတင် ရန်လိုအပ်သည်။ ထူးထူးျခားျခား မရွိ မွသာ ဒီကား ကုိ သူ ေမာင္းႏွင္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ယာဉ်မောင်း များအား ကပ် ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် ပိုး သန့် ဆေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို အခမဲ့ ပေးရန် ပိုး သန့် ဆေး နေရာ ၅ ခု ကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်းက Didi သည် ရှန်ဟိုင်း Xuhui ၊ Jing ‘an, Yangpu, Minhang နှင့်အခြား ခရိုင် များတွင် ကပ် ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အထောက်အကူပြု ယာဉ် တန်း များ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် လူနာ ၄ ၅၀၀ နီးပါး နှင့် ကပ် ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင် နေစဉ် စုစုပေါင်း ကီလိုမီတာ ၄၀၀, ၀၀၀ ကျော် ရှိသည့် ဆေး ပစ္စည်း ၁၃၀, ၀၀၀ ကျော် သယ် ဆောင်ခဲ့သည်။
T3 Travel က ပလက္ ေဖာင္း ဟာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ရွန္ ဟိုင္း ေဒသမွာ ပံုမွန္ ျပန္လည္ လည္ပတ္ မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ကုမ္ပဏီသည် ရှန်ဟိုင်း တွင် ပိုး သန့် ဆေး သည့်နေရာ များစွာ ကိုတည်ထောင် ထားပြီး ယာဉ်မောင်း များအား ပိုးသတ်ဆေး နှင့်အခြား ကပ် ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေ ပေးပြီး အခမဲ့ ယာဉ် ပိုး သန့် ဆေး ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။
Saicmobility က ရှန်ဟိုင်း (အလယ်အလတ် နှင့်မြင့်မားသော စွန့်စားမှု ဒေသများ မှအပ) ရှိ ၎င်း ၏အွန်လိုင်း စီးနင်း မှု နှင့်အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဇွန် ၁ ရက် 00:00 မှ အပြည့်အဝ နှင့် စနစ်တကျ ပြန်လည်စတင် မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အဲ ဒီေန႔ ကစၿပီး ရွန္ ဟိုင္း ၿမိဳ႕ခံ ေတြဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ အက္ ပလီ ေကး ရွင္း ကေနတဆင့္ Ride Booking လုပ္ ႏိုင္ပါတယ္။
မေလ ၃၁ ရက်အထိ Hello Travel Shanghai Business Team ၏ရှေ့ တန်း စစ်ဆင်ရေး နှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ထမ်းများ၏ ၆၀% နီးပါးကို ပြန်လည် လုပ်ကိုင် ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေး ၀ န်ထမ်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သည် ရှန်ဟိုင်း ရှိ စက်ဘီးစီး ခြင်းနှင့် ပိုး သန့် ဆေး ခြင်းအတွက် တာဝန် ရှိသည့် ရှေ့တန်း လုပ်ငန်း များနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များ သို့ပြန်လာ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Platform ရိယာ တစ်ခုစီတွင် တစ်နေ့လျှင် စက်ဘီး ၃၀၀၀ ထက်မနည်း ပိုး သန့် ဆေး မှုရှိစေရန် ပလက်ဖောင်း သည် ဇယားကွက် စီမံခန့်ခွဲမှု တွင် စက်ဘီး ပိုး သန့် ဆေး ခြင်းလုပ်ငန်း များကို လုပ်ဆောင် လိမ့်မည်။ ကပ် ရောဂါ ကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေး များ ကိုထိခိုက် သော အသုံးပြုသူ များကိုလည်း လျော်ကြေး ပေးလိမ့်မည်။
ဤ ကပ် ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ် ခြင်း ပတ် ၀ န်းကျင် မှစ၍ Saicmobility သည် CDC ၏ မော်တော်ယာဉ် များ လိုအပ် ချက်နှင့် nucleic acid နမူနာများကို လွှဲပြောင်း ရန်အတွက် ကပ် ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ မေလ ၂၇ ရက်အထိ အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်း ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် ပြီးစီး ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အလုပ် ချိန် နာရီ ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
အမေရိကန် အစုန်ယာဉ် မီနီထရပ်အစီအစဉ် စတင်
ဘေဂျင်းအခြေစိုက် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်းဖြစ်တဲ့ America Group ဟာ မကြာသေးခင်က “American Player Play” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ App Store မှာ Return Car Mini Program ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။